Laamaha Afka Igbo iyo Yoruba oo maanta ku soo biiray BBC-da - BBC News Somali
Laamaha Afka Igbo iyo Yoruba oo maanta ku soo biiray BBC-da
Image caption Waxaa jira idacaada aan abdnayn oo wararka ku tebiyo luuqadaha Igbo iyo Yoruba
Waxaa hawada soo galay laba laamood oo cusub oo ka tirsan BBC-da qeybta la hadasha dibedaha oo wararka ku tebin doona afafka Igbo iyo Yoruba, luuqadahaas oo looga hadlo dalka Nigeria.
Waxay adeegoodu ku billaabayaan bog ay internet-ka ku leeyihiin iyo baraha bulshada.
Igbo waxaa looga hadlaa koonfur bari Nigeria halka Yoruba looga hadlo koonfur galbeed Nigeri iyo dalalka Benin iyo Togo
Laamahan cusub waxay qeyb ka yihiin qorshihii ugu weynaa ee lagu ballaarinayo BBC-da qeybteeda dibedda la hadasha wixii ka dambeeyay 1940-kii.
BBC-da waxa ay sidoo kale sare u qaadaysaa laamaha TV-yada ee Afrika, taas oo ay ka mid tahay in lagu daro 30 barnaamij oo TV ah oo laga sii dayn doono taleefishino xiriir la leh BBC-da oo ku yaal dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika.
Luuqadaha Carabiga iyo Ruushka ayaa sidoo kale la xoojinayaa.
Guud ahaan BBC-da waxay billaabeysaa 12 luuqadood oo looga hadlo Afrika iyo Aasiya.
Igbo - lix arrimood
Dadka caanka ah ee luuqadan ku hadla waxaa ka mid ahaa Chinua Achebe, oo lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah dadkii doorka ku lahaa aasaaska sugaanta Afrika.
In ka badan 30 milyan oo qof ayaa ku hadasha luuqaddan oo intooda badan ku nool koonfur bari Nigeira
Hal eray ayaa macna badan yeelan kara, iyadoo ay ku xiran tahay hadba sida jumladda loo geliyo looguna dhawaaqa. Tusaale ahaan erayga ''Akwa'' waxaa laga wadaa sariir, ukun ama dhar.
Dhaqdhaqaaq gooni u goosad doon ah oo Igbo ah ayaa dagaal sokeeye billowday 1967.
Nooc ka mid ah lowska ayaa muhiiim u ah dhaqanka Igbo--martida ayaana lagu soo dahweeyaa.
bbc.com/igbo waxay sidoo kale leedahay bog Facebook ah iyo Instagram
Shaqaalaha BBC Igbo:
Ka gudub Facebook daabacaad W.Q BBC News Igbo
Dhammaadka Facebook daabacaadda qore BBC News Igbo
Nigeria waa dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, waxaana looga hadlaa 200 oo luuqadood. BBC-da ayaa sanadkii la soo dhaafay billowday inay adeegyadeeda ku ballaarisa dalkaasi sanadkii la soo dhaafay.
Yoruba - Todoba aririmood
Dadka caanka ah ee luuqadan ku hadla waxaa ka mid ah Wole Soyinka, oo abaalmarinta Nobel Prize ugu guuleystay curinta gabayada iyo riwaaydaha
In ka badan 40 milyan oo qof ayaa ku hadasha luuqadan oo caan ah ka ah koonfur galbeed Nigeria
Hal eray ayaa macna badan yeelan kara, iyadoo ay ku xiran tahay hadba sida jumladda loo geliyo. Tusaale ahaan erayga ''owo'' waa lacag, sharaf ama xaaqin. Waxay ku xiran tahay sida loogu dhawaaqo.
Waxaa jirta diin dhaqamneed Yoruba oo ay xitaa ku dhaqmaan dad ku nool koonfurta Ameerika oo la geeyay halkaa xilligii dadka addoon ahaan looga ganacsan jiray oo laga tallaabin jiray badweynta Atlantikada.
Waxaa jira aflaam iyo heeso lagu jilay luuqada Yoruba oo door weyn lku leh kobaca Nollywood.
Waxaa jirta maahmaah caan ah oo oraneysa:Ile laawo k'a to s'ọmọ lorukọ" oo laga wado '' carruurtaada u bixi magac dhaqankaaaga waafaqsan''
bbc.com/yoruba waxaa sidoo kale laga helaa baraha Facebook iyo Instagram
Kooxda BBC Yoruba:
Ka gudub Facebook daabacaad W.Q BBC News Yoruba
Dhammaadka Facebook daabacaadda qore BBC News Yoruba